Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay duqayn saqdii dhexe ee habeenkii Khamiista ka dhacday Deegaanka Buqo oo qiyaastii 50km u jirta Degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Wararka ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay fuliyeen duqayn Daacishta Somaliya lagula beegsaday Gobolka Bari ee Puntland.
Warsaxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaasi lala eegtay xero ay ku sugnaayeen Daacishta Soomaaliya, isla-markaana ay iminka wadaan qiimayn ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Ilo wareedyo madax bannaan, ayaa sheegaya in masuuliyiinta duqayntaasi lagu dilay uu ka mid yahay Hogaamiyaha Daacishta Somaliya, Sheekh C/qaadir Muumin Cali oo daba-yaaqadii sanadkii 2015 ka baxay Ururka Al Shabaab.
Wararka ayaa intaa ku darayaan in duqayn kale Jimcihii lala beegsaday Daacishta Soomaaliya, xilli ay meydad ku aasayeen meel aan sidaasi uga fogayn Deegaanka Buqo.
Jaamac Maxamed Quurshe Gudoomiyaha Degmada Qandala ayaa sheegay inay wararka ku hayaan in Daacishta Soomaaliya duqayn culus lagula beegsaday Deegaanka Buqo, inkastoo uu ka gaabsaday in uu faah faahin ka sii bixiyo khasaaraha ururka Daacish ka soo gaaray duqayntaasi.
Sheekh C/qaadir Muumin oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska ayaa horey u soo noqday Madaxii Dacwadda ee ururka Al Shabaab, ayaa bishii October ee sanadkii 2015 Buuraleyda Galgala ee Gobolka Bari uga dhawaaqay inuu isaga baxzy Ururka Al Shabaab.
November 12, 2017 Geesey